Ny filohan'ny birao fizahantany afrikana dia naneho hevitra momba ny andro iraisam-pirenena momba ny ala sy ny andro manerantany momba ny rano
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny filohan'ny birao fizahantany afrikana dia naneho hevitra momba ny andro iraisam-pirenena momba ny ala sy ny andro manerantany momba ny rano
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Filohan'ny birao fizahan-tany any Afrika Alain St.Ange
Alain St.Ange dia mandrisika ny mpikambana rehetra sy ny tontolon'ny fizahan-tany hanararaotra ireo fotoana fandinihana natao mba hanaovana ezaka hampielezana ny fahatsiarovan-tena momba ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny ala sy ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana.
Ny firenena mikambana dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena momba ny ala amin'ny 21 martsa
Miankina amin'ny ala ny olona manerantany amin'ny fivelomana sy ny filàna isan'andro
Ny Filoham-pirenena koa dia nanatevin-daharana ny fankalazana ny Andro manerantany ho an'ny rano tamin'ny 22 martsa 2021 teo ambanin'ny lohahevitra 'Manombana ny rano'
Isan-taona amin'ny 21 martsa dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena momba ny ala ny Firenena Mikambana. Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia: 'Famerenana amin'ny ala: làlana mankany amin'ny fahasalamana sy fahasalamana'. Ny ala dia ny havokavin'ity tany ity. Ny olona eran'izao tontolo izao dia miankina amin'ny ala ho an'ny fivelomana sy ny filàna isan'andro ary manampy amin'ny fisorohana ny fiakaran'ny hafanana manerantany. Amin'ity fotoana ity, ny filohan'ny Birao fizahantany any Afrika Alain St.Ange dia mandrisika ny mpikambana rehetra sy ny tontolon'ny fizahan-tany hanararaotra ireo fotoana fandinihana natao mba hanaovana ezaka hampielezana ny fahatsiarovan-tena momba ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny ala sy ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana.
Ankoatra izany, mandritra ny Birao fizahantany any Afrika Forum natao tamin'ny 22 martsa 2021, izany filàna izany hamahana ny olana izay mety hiteraka famongorana ny karazan'olona sasany tandindonin-doza ary mety hampidi-doza lehibe ny zava-manan'aina. Fantatsika rehetra fa ny fihenan'ny fihazana olona dia tsy hampihena ny fahasamihafan'ny bibidia fa hisy fiantraikany ratsy amin'ny indostrian'ny fizahantany hoy ny filoha. Faniriany mafy ny hanasongadinana fa ny fanoloran-tena amin'ny paikady fanoherana ny fanjonoana olona noresahina nandritra ny Forum dia azo antoka fa handray soa amin'ny ezaka fiarovana ny bibidia.
Miaraka amin'ny fanolorany tena tsy miovaova amin'ny fiarovana sy fiarovana ny planeta, dia niditra tamin'ny fankalazana ny Andro manerantany ho an'ny rano tamin'ny 22 martsa 2021 koa ny filoham-pirenena teo ambanin'ny lohahevitra 'Valuing Water'. Amin'ny alàlan'ity hafatra ity, ny filoha Alain St.Ange dia maniry ny hiantso ireo mpikambana ao amin'ny Birao Fizahan-tany any Afrika ary hamporisika azy ireo mivantana sy tsy mivantana mba hampitombo ny ezaka hahatonga ny tsirairay hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny rano mitete iray ary hihetsika amin'ny fomba tompon'andraikitra eo am-pandaniana ity loharano voafetra sy tsy azo soloina ity.
Ny rano dia 'fiainana' hoy izy. Raha ny marina, ny rano dia manana lanjany lehibe tokoa ho an'ny ankohonantsika, ny sakafo, ny kolontsaina, ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny toekarena ary koa ny tontolo iainantsika.
'Ny rano, ala ary zava-manan'aina dia singa lehibe amin'ny fahaveloman'ny planeta,' hoy izy namarana ny teniny ary tamin'ny naha mpanafatra fizahan-tany ny Birao fizahantany any Afrika manana adidy ambony mba hanao fanomezana ihany koa.